17, ဇွန်လ 2019
စတင်ပြုလုပ်ခြင်းယဉျကြေးမှုအက္ခရာများ, epilogues နှင့် epitaphs
16 စက်တင်ဘာလ 2018 Belz 0
ဥရောပနိုင်ငံသားသူမကစပိန်ချစ်သောသူ vikinga အဖြစ်, သာမန်များနှင့်၎င်းတို့၏နိုင်ငံရေး၏သမာဓိမရှိခြင်းကိုခုခံကာကွယ်ဖို့ဘယ်လိုသိတယ်တဲ့တိုင်းပြည်အတွက်, နေ့တိုင်းသူ့ကိုအံ့သြစေတယ်အဘယ်အရာကိုသက်သေအဖြစ်သူ့ကို stuns [ ... ]
13 စက်တင်ဘာလ 2018 Belz 0
တိရစ္ဆာန်မှ Clubbed သင်အထီးသို့မဟုတ်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဖြစ်စေ, ပင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ကျူးကျော်ပြန်လုပ်မှပြန်လာနိုင် asocial ခွင့်လျင်မြန်စွာအရေးတကြီးနှင့်မကျေနပ်ချက်ကိုရန်မအယူခံနဲ့ကုသကြပါတယ်။ တစ်ဦး featured [ ... ]
fixed ဘူတာရုံများနှင့်ဖွင့်ချဉ်းကပ်ဖို့ရှာသောမမြင်ရတဲ့ loners ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းရထား
4 စက်တင်ဘာလ 2018 Belz 0
တခါတရံမှာစက်ခေါင်း, ဘေးထွက်ဒီ ODE နည်းနည်းကဗျာကိုသို့မဟုတ်ကျမ်းပိုဒ်နဲ့အတူ mode ကိုစဉ်းစားအထီးကျန်နှင့်မမြင်ရတဲ့ခရီးသည်နှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်ရာသီ left အထူးသဖြင့်အခါ, နောက်ပြန်ဆုတ်စတင်ရန်ဖိအားဆုံးရှုံး [ ... ]
ကြောင်းခေါ်ဆိုခ madhouse ကမ္ဘာ၏ဝေးခြမ်းအပေါ်တစ်ဦး sociopath ၏ကိုယျတှေ့မှတျတမျး
21 သြဂုတ်လ 2018 Belz 1
အသက်အရွယ်ကိုတောင်သူတို့အစက်ရုပ် implantation ၏အနာဂတ်အတွက်ယုံကြည်သူခွင့်လွှတ်မထားဘူးအထူးသဖြင့်လာသောအခါကြမ္မာလုပ်ပေးမခေါ်လိမ့်မည်သည့်အခါသေဆုံးပါလိမ့်မယ်သိတယ်သူယောက်ျား၏ကျဆင်းမှု, [ ... ]
27 ဇူလိုင်လ 2018 Belz 0
မစိုးရိမ်ပါနဲ့: ဒါဟာသင် .. အဘယ်သူမျှမပင်နောက်ပြန်ကြိမ်လျှင်, လိုလားနိုငျသောတော့လို့။ ရသည်မှာစပိန်သူ့ကိုအသုံးပြုပုံချေမှုန်းရေးအတှကျတစျခု simulated လောက၏အ breadbasket ဖြစ်လာသည် [ ... ]
15 ဇူလိုင်လ 2018 Belz 0
သီချင်းစာသားနှင့်အတူအသီးအသီးနိယာမနှင့်တနင်္ဂနွေအဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ရဲ့တန်ဖိုးကို ပတ်သက်. သတင်းစကားကိုမေ့လျော့ခြင်းမရှိဘဲ, စုဆောင်းကြောင်း Distended မှတ်ချက်။ ဤဆောင်းပါးမှာအားလုံးရည်ရွယ် [ ... ]
ထွက်. လိုသောမရှိဘဲဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ် ...
27, ဇွန်လ 2018 Belz 2
mortification နှင့်ရှေ့ဆက်မျှဝေဖို့တစ်ခုတည်းအငြင်းအခုံအဖြစ် boatman ၏အမှန်တရားတွေမပါဘဲ၎င်းတို့၏ခြေထောက်အကြားကသူတို့ရဲ့အမြီးနှင့်အတူထွက်လာလိုခြင်းမရှိဘဲထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာသတ်မှတ်ရာတွင်မည်သို့ဝေးကိုသိတော့မှ [ ... ]
တစ်ဦးက "ပုံပြင်" .. မပေးလည်းဝေးသည့်ပုံပြင်ပြောပြရန်
11 အောက်တိုဘာလ, 2017 0
ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးမစ်ရှင်။ ကျနော်တို့လေယာဉ်ဖြင့်ခြေထောက်နှင့်အီကွေတာဂီနီ left ခဲ့သည်။ မျက်ရည်တစ်စစင်္ကြံထဲမှာလေဆိပ်ငါ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်အောက်ပိုင်းသေတောခုတ်ဓားများကိုထိန်းချုပ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောက် macerated [ ... ]